राष्ट्रिय Archives - नमस्ते खबर
राष्ट्रमा घटेका विभिन्न समाचारहरु
भर्खरै नेपाल प्रहरीले काठमाडौबाट गर्यो कमाल
भर्खरै नेपाल प्रहरीले काठमाडौबाट गर्यो कमाल काठमाडौं, २७ फागुन । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोँगबुको ‘स्विप अपरेशन’मा ३६ जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रभागले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज, बालाजु, गौशाला र स्वयम्भूको सहयोगमा शनिबार राति गरेको अपरेशनमा उक्त व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालित होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजाघर, फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई पक्राउ गरेको हो । प्रभागका प्रमुख प्रताप पौडेलले १२० प्रहरीको सहयोगमा गरिएको अनुसन्धानमा पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामी अनुसन्धान गर्छौं, अनुसन्धानमा गल्ती देखिए मुद्दा चलाउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो । अन्य…
गोंगबुको गेष्टहाउसमा युवतीको शव भेटियो, हत्याको आशंका गेष्टहाउस सन्चालकसहित तीन जना पक्राउ
March 11, 2018 joes_limbu joes_limbu
गोंगबुको गेष्टहाउसमा युवतीको शव भेटियो, हत्याको आशंका गेष्टहाउस सन्चालकसहित तीन जना पक्राउ २६ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबु मित्रनगरस्थित श्रीगणेश गेष्टहाउसमा एक युवती मृत फेला परेकी छन् । नयाँ बसपार्क नजिक रहेको सोही गेष्टहाउसमा कार्यरत रोल्पा घर्तीगाउँकी १९ वर्षीया सपना घर्तीमगर शनिबार मृत फेला परेकी हुन् । प्रहरीका अनुसार गेष्टहाउसको पहिलो तल्लाको कोठा नम्बर एकमा युवतीको शव फेला परेको हो । घटना अनुसन्धानको लागि प्रहरीले गेष्टहाउस सन्चालक देवेन्द्र गौतमसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । मृतक सपनाका दाजु भुपेन्द्रका अनुसार कोठाको भित्ता, बाथरुम र सिरकमा रगत र शरीरमा घाउ चोट…
आजको अखबारः प्रधानन्यायाधीशका चार थरी जन्ममिति, प्रदेश सांसदलाई किस्तामा घडेरी राष्ट्रियसभामा तीन जना सिफारिस, मन्त्रीलाई ५० लाख उपचार खर्च
February 10, 2018 joes_limbu joes_limbu
आजको अखबारः प्रधानन्यायाधीशका चार थरी जन्ममिति, प्रदेश सांसदलाई किस्तामा घडेरी राष्ट्रियसभामा तीन जना सिफारिस, मन्त्रीलाई ५० लाख उपचार खर्च २७ माघ, काठमाडौं । आज शनिबार भएकाले सबैजसो पत्रिकाहरुले शनिबारीय अंक प्रकाशित गरेका छन् । त्यससँगै फरक फरक समाचारहरुले पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएका छन् । दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप खेप्दै आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका चार थरी जन्ममिति सरकारी अभिलेखमा फेला परेको, राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य सरकारले सिफारिस गरेको लगायतका समाचारहरु आजका पत्रिकामा छन् । प्रधानन्याधीश पराजुलीका चार थरी जन्ममिति सरकारी अभिलेखमै चार थरी जन्ममिति फेला परेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली थप विवादमा तानिएका…
सांसदको चेतावनी-बारा, पर्सा र रौतहटलाई छुट्टै प्रदेश बनाउँछौं योके पक्का पक्की होला या नहोला ?
February 2, 2018 joes_limbu joes_limbu
सांसदको चेतावनी-बारा, पर्सा र रौतहटलाई छुट्टै प्रदेश बनाउँछौं योके पक्का पक्की होला या नहोला ? १९ माघ, वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ को राजधानी वीरगञ्ज नबनाए बारा, पर्सा र रौतहट मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउने चेतावनी आन्दोलनकारीले दिएका छन् । वीरगञ्जको घण्टाघरमा शुक्रबार आयोजित बिरोधसभामा बोल्ने वक्ताहरुले छुट्टै प्रदेश बनाउने चेतावनी दिएका हुन् । वीरगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन दवाव दिने उद्देश्यले गठन गरिएको संघर्ष समितिको आव्हानमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले वीरगञ्जलाई जसरी पनि राजधानी बनाउने बताए । ‘काठमाडौंले र जनकपुरले सुन वीरगञ्ज राजधानी हुँदैन भने बारा, पर्सा, रौतहट…
दुई घारबाट मौरी पालन सुरू गरेका दार्चुलाका गणेश कार्की अहिलै लाखौ आम्दानि गर्छन्।
December 29, 2017 joes_limbu joes_limbu
पैसासमेत गन्न नजान्ने एक युवकले वार्षिक रु छ लाख भन्दा बढी कमाइ गरिरहेका छन् भन्ने सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । कक्षा ३ सम्म मात्रै अध्ययन गर्नुभएका दार्चुला लेकम गाउँपालिका–१ सेजालीका गणेश कार्की मौरीपालन व्यवसाय अपनाएर गाउँमै उदाहरणीय बन्नुभएको छ । स्नातकोत्तरसम्म पढेर पनि नेपालमा रोजगारी नै पाइँदैन भनेर विदेश पलायन हुन खोज्नेहरुले गणेशबाट सिक्नुपर्छ । पाँच वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक रुपमा मौरीपालन शुरु गर्नुभएका उहाँले यसै व्यवसायबाट आठ जनाको परिवार सजिलैसँगै पालिरहनुभएको छ । रिड्स नेपाल नामक संस्थाले शुरुमा दुई घार मौरीे उपलब्ध गराएको थियो । त्यही दुई घार मौरीबाट…
कृषी किसान समाचार
बिर्तामोड । पूर्वी पहाडको प्रमुख नगदे बाली अलैँचीको मूल्य वृद्धि भएसँगै कृषक र व्यापारीहरुमा उत्साह छाएको छ । व्यापारीले किसानबाट ग्रेडिङ गरेको अलैँची प्रतिमन ३२ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न थालेका छन् ।
December 19, 2017 joes_limbu joes_limbu
बिर्तामोड । पूर्वी पहाडको प्रमुख नगदे बाली अलैँचीको मूल्य वृद्धि भएसँगै कृषक र व्यापारीहरुमा उत्साह छाएको छ । व्यापारीले किसानबाट ग्रेडिङ गरेको अलैँची प्रतिमन ३२ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न थालेका छन् । चालु माल भनिने ग्रेडिङ नगरिएको अलैँची प्रतिमनमा २९ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ । अलैँचीको मूल्यमा शनिबारदेखि वृद्धि भएको हो । नेपाल अलैँची व्यवसायी संघका पाँचथर अध्यक्ष खेमनाथ अधिकारीले भारत र भुटानमा उत्पादित अलैँची अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा सकिँदै गएकोले मूल्य वृद्धि भएको हुनसक्ने बताए । अलैँचीको मूल्यमा वृद्धि भएपछि किसानहरु उत्साहित भएका छन् ।किसानहरुले मूल्य वृद्धिको आशमा बगानबाट…
करणी गरेको अभियोगमा बालक पक्राउ
November 25, 2017 namestekhabar
गाईघाट, उदयपुर, ९ मंसिर : जर्वजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–१२ बोटे टोलका १३ वर्षीय बालक रहेको छ । घरमा अभिभावक नभएको मौका छोपेर तीन वर्षीया छिमेकी बालिकालाई अम्बा र केरा खान दिन्छु भनेर ललाई फकाई कोठामा लगेर जर्वजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान शुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । बालिका चिच्याएपछि छिमेकीले थाहा पाएर बालकलाई रंगेहात पक्राउ गरी प्रहरीमा बुझाएका थिए । बालिकाको जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा स्वास्थ्य जाँच र उपचार भइरहेको छ…
राष्ट्रिय सबै समाचार